Inona ny tranokala iray? - Ny valin'ny fanontaniana
Ny tranokala iray dia tranonkala izay manaparitaka ny votoaty avy amin'ny blôgy hafa tranonkala mampiasa teknolojia fanalana ny tranonkala. Io votoaty io dia mirona amin'ny tanjona amin'ny famokarana vola miditra, na amin'ny alalan'ny dokam-barotra na amin'ny fivarotana ny angon-drakitra mpampiasa. Ny tranonkala samihafa isan-karazany dia samy hafa amin'ny endriny sy ny karazany, manomboka amin'ny tranonkalan'ny tranonkala spam mankany amin'ny fitrandrahana ny vidiny sy ny fividianana fivarotana amin'ny aterineto.
Ny karoka fitadiavana samihafa indrindra indrindra ny Google dia azo raisina ho toy ny tranokala. Manangona votoaty avy amin'ny vohikala maro izy ireo, afa-tsy ao anaty tahirin-tserasera, manondro sy manolotra ny votoatiny na entina an-tsokosoko ho an'ireo mpampiasa aterineto. Raha ny marina, ny ankabeazan'ny votoaty nopotehina na nesorina tamin'ny milina fikarohana dia nahazoan-dalana.
Natao ho an'ny dokam-barotra:
Ny tranokala sasany dia noforonina mba hanangonam-bola amin'ny aterineto amin'ny alalan'ny programa fanaovana dokam-barotra samihafa. Amin'ny toe-javatra toy izany dia antsoina ho Made for WebSense AdSense na MFA izy ireo. Ny teny fanesoana dia manondro ireo tranonkala izay tsy manana tombatombatombony dia manantena ny hisarihana, hikolokolo ary hanangona ireo mpitsidika amin'ireo tranonkala voatokana hahazoana tsindry amin'ny dokam-barotra. Ny vohikala natao ho an'ny tranonkala AdSense sy ny blaogy dia heverina ho toy ny spam moter mahery. Mamefy ny valin'ny fikarohana miaraka amin'ireo valiny tsy mahafa-po. Ny vohikala sasany dia fantatra amin'ny fifandraisana amin'ny tranokala hafa ary mikendry ny hanatsara ny fizotry ny fikarohana amin'ny alàlan'ny tambajotra bilaogy tsy miankina..Talohan'ny fampivoaran'ny Google ny algorithms amin'ny fikaroham-bahaolana, ireo karazana tranokala hafa izay nalaza ho malaza amin'ny SEO mpitsabo sy mpandraharaha. Nampiasa an'io fampahalalana io izy ireo ho an'ny spamdexing ary nanao asa maro samihafa.
Fantatra amin'ny voka-dratsin'ny lalàna ny zon'ny mpamorona. Na dia maka ny votoaty avy ao amin'ny tranonkala misokatra aza dia ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamorona, raha tsy atao amin'ny fomba tsy manaja ny fahazoan-dàlana. Ohatra, ny GNU Free Documentation License ary ny Creative Commons ShareAlike fahazoan-dàlana dia nampiasaina tao amin'ny Wikipedia ary nitaky fa ny mpamoaka ny Wikipedia indray dia tsy maintsy nampahafantatra ny mpamaky fa ny votoaty dia nalaina tao amin'ny rakipahalalana.
Ireo fomba na fomba fampiharana ny tranokala marefo dia miovaova avy amin'ny loharano iray mankany amin'ny iray hafa. Ohatra, ireo vohikala manana tahiry betsaka na votoaty toy ny solosaina elektronika, fiaramanidina, ary fivarotana fandefasana entana, dia mety ho tarihin'ny mpifaninana amin'ny ankapobeny. Ny mpifaninana aminy dia te-hitazona ny mombamomba ny vidiny sy ny soatoavin'ny marika. Ny karazan-tsakafo iray hafa dia misintona sombintsombiny ary ny lahatsoratra avy amin'ny tranonkala izay avoakany ho an'ny teny manan-danja manokana. Miezaka manatsara ny laharany amin'ny pejin'ny valin'ny fikarohana (SERP) sy ny piggyback amin'ny laharana voalohan'ny tranonkala. Ny sakafo ara-tsimika ihany koa dia mora vidy amin'ny mpangalatra. Ireo mpandrafitra dia matetika mifandray amin'ny toeram-pambolena amin'ny rohy ary voamarika rehefa miverina amin'ny tranokala iray hatrany indray ny tranokala iray.
Ireo mpandrindra izay namorona tranokala dia afaka mividy ireo sehatra efa tapitra mba hamerenana azy ireo ho an'ny tanjona SEO. Ny fampiharana toy izany dia mamela ny manam-pahaizana SEO hampiasa ireo rakitra rehetra momba ny anaran-toerana. Ny sasany amin'ireo mpitsikilo dia miezaka ny mifandray amin'ny lohahevitr'ireo tranonkala efa rava sy / na manadino ny votoaty manontolo ao amin'ny Internet Archive, ary mitazona ny maha-azo itokiana sy ny fahitana azy. Ny serivisy fampiantranoana matetika dia manome ny toerana hitadiavana ny anaran'ny faritra efa tapitra, ary ireo hackers na spammers dia mampiasa izany fampahalalana izany mba hampivelatra ny tranonkalany manokana Source .